Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3) HPLC8698% | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1
SKU: 745-65-3. Category: Qaar kale waxay
AASraw wuxuu leeyahay awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Prostaglandin E1 (PGE1), oo sidoo kale loo yaqaano alprostadil, waa wax caadi ah oo prostaglandin ah oo loo isticmaalo daawo ahaan. Ilmaha qaba cillado wadnaha lagu dhasho, waxaa loo isticmaalaa cirbado gaabis ah xidid si loo furo arthroseosuska ductus illaa qaliin la samayn karo. Marka la gooyo guska ama meeleynta kaadida, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn.
Alprostadil, (PGE1), Astaamaha asaasiga ah ee Prostaglandin E1
Formula kelli: C20H34O5
Miisaankani waa: 354.48
Dhibcaha Biyaha: 115-116 ° C
Kaydinta Nabadgelyada: 2 ° -8 ° C
Alprostadil, (PGE1), isticmaalka Prostaglandin E1 (745-65-3) ee wareegga steroids
Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (CAS 745-65-3), oo loo yaqaan Avastin iyo Mvasi.
Alprostadil, (PGE1), Adeegsiga Prostaglandin E1
Bevacizumab wuxuu yimaadaa xalka si uu si tartiib ah u maamulo xididka. Bevacizumab waxaa ku takhasusay dhakhtarka ama kalkaalisada xafiiska caafimaadka, xarunta faleebada, ama isbitaal. Bevacizumab waxaa badanaa la bixiyaa marxalad kasta 2 ama 3 kasta.
Waa inay qaataan daqiiqado 90 si aad u hesho qiyaasta ugu horeysa ee bevacizumab. Dhakhtar ama kal-kaaliye ayaa si taxadar leh kuu daawan doona si aad u ogaatid sida jidhkaagu uga falceliyo bevacizumab. Haddii aadan haysan wax dhibaato ah markaad hesho qadarkaaga koowaad ee bevacizumab, waxay caadi ahaan qaadaneysaa 30 ilaa daqiiqado 60 si aad u hesho mid kasta oo ka mid ah qiyaasta daawadaada ee soo hartay.
Duruufaha Bevacizumab wuxuu sababi karaa falcelin dhab ah inta lagu jiro faleebada daawada. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadahan soo socda, u sheeg dhakhtarkaaga isla markiiba: neefta oo adkaata ama neefta oo kugu adkaata, qarqaryo, ruxin, dhidid, madax xanuun, xabadka, dawakhaad, dareen-qabasho, duufaan, cuncun, finan, ama finan. Dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu hoos u dhigo infekshanka, ama dib u dhigo ama joojiyo daaweyntaada haddii aad la kulantid kuwan ama waxyeelo kale.
Sidee Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 (745-65-3)
Daaweynta xinjirta erectile (ED), alprostadil wuxuu nasiyaa murqaha isku midka ah ee cavernosum corpus; Si kastaba ha noqotee, qaabka saxda ah ee tallaabada lama yaqaan. Waxay u muuqataa in saameyntu ay sabab u tahay sii kordhinta xudduudaha gudaha ee AMP cyclical. Alprostadil waxay wax ka qabtaa xayiraadaha xayeysiinta ah ee xayeysiiska ah ee kiciya adenylate cyclase iyo kor u qaadista ambalaaska intrasellular AMP, taasoo keentay in la kiciyo qanjirada borotiinka isla markaana keento nasasho murqaha ah. Tallaabadani waxay ka duwan tahay papaverine taasoo ka hortagaysa fosfooriyada qiiqa oodhan oo dhexdhexaadin ah AMP bacdamaa oo faragelisa kicinta kalsiyum inta lagu jiro murqaha muruqyada. Alprostadil waxay sidoo kale ka horjoogsan kartaa falalka walbahaarka ee norepinephrine iyada oo looga hortagayo sii daayo neuronal of norepinephrine waxaanay kor u qaadi kartaa ficillada unugrenergic, noncholinergic vasodilatory neurotransmitters. Marka la daaweynayo ED, alprostadil wuxuu keenaa kacsi iyadoo lagu nasteexayo murqaha isku midka ah ee saxda ah iyo xididdada loo yaqaan 'cavernosal arteries' iyo laanta. Dilitaanka halbowlayaasha cavernosal waxaa weheliya xajmiga kor u kaca ee kor u kaca iyo kor u qaadista caabbinta dibadda. Sidaa darteed, boosaska lacaga ayaa sii fidi kara, dhiigana wuxuu noqdaa mid lagu soo celiyo sarbeebyada si loo jeexo venules oo ka soo horjeeda tunica albuginea. Si loo gaaro xasaasiyado ku filan iyo adkeyn, tunica albuginea waa in ay ku filan tahay in ay ku adkaato in ay ku cadaadiso venules oo gadaal u dhigto sidaa darteedna xannibaadda foosha. Nidaamkan waxaa sidoo kale loogu yeeraa habka loo yaqaan 'veno-occlusive'. Alprostadil si toos ah uma saameyneyso xayawaanka ama orgasmka.
Marka lagu daaweeyo qalitaanka wadnaha ee dhuunta arteriyosus, alprostadil waxay ku haysaa qallalka macaamiisha iyadoo la nasasiinayo muruqyada siman ee ductus arteriosus. Alprostadil waxay waxtar u leedahay haddii la bixiyo kahor dhammaystirida anatomic-ka ee xirmada arthritis. Maamulka alprostadil si ay u neefsato cilladaha wadnaha ee wadnaha ee caanka ah (xaddididda dhiigga soodhowrka ee xaddidan) waxay keenaysaa kororka socodka dhiigga sambabada iyo / ama kordhinta isku dhafka u dhexeeya wareegga nidaamka iyo sambabaha taasoo keenaysa koror ku meel gaar ah ee cadaadiska qeybta oksijiinta (PaO2) iyo ogeysiinta oksijiinta. Jawaabta wadnaha cyanotic-ka ee loo yaqaan 'alprostadil terabi'ka' ayaa sidoo kale la xidhiidha hindisaha PO2. Jawaabta ugu weyn waxay u muuqataa inay ku dhacdo kuwa uurka leh ee leh nafaqo yaryar PaO2 (<20 torr), cirridka qumanka ductus arteriosus, iyo kuwa 4 maalmood jira ama ka yar. Nafaqo leh qiimayaasha PaO2 ee 40 torr ama ka badan sida caadiga ah ayaa waxoogaa jawaab u leh alprostadil.
Daawooyinka alprostadil waxay keeni kartaa ka hortagga ama saxitaanka acidemia, korodhka wadnaha oo kordhiya cadaadiska dhiigga ee nidaamka dhiigga, kordhinta garaaca wadnaha ee femoral, korodhka dhiigga ee dhiigga iyo shaqada, hoos u dhaca hoos u dhaca inuu hoos u dhigo cadaadiska dhiiga ee aorto (marka la eego gawracatada oo la isku kalsoonaan karo), iyo / ama hoos u dhac ku yimid cadaadiska wadnaha ee sambabada si uu hoos ugu dhaco cadaadiska aortiska (oo la yiraahdo neonates oo leh carqalado qotodheer). Si ka duwan sida ciyriyanka ciyriyotic, waxtarka alprostadil ee acyanotic neonates kuma xirna da'da ama uur qaadista PaO2.
Alprostadil (Prostglandin E1) waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn (ED) ee ragga ragga ah. Waxtarka alprostadil ee daaweynta ED waa kala duwan tahay; Qiyaasta jawaabta ayaa guud ahaan hoos u dhigeysa bukaanada qaba ED sababo kala duwan oo loo yaqaan 'EDI' marka la barbar dhigo kuwa ED qaba sababo la xiriira neurogenic, psychogenic, ama vasculogenic. Labo nooc oo qiyaaso ah ayaa loo suuq gareeyaa daaweynta ED: badeeco shuban (Muse) kaas oo isticmaala pellet daawo oo lagu maamulo galmada iyo cirbada (Caverject ama Edex) kaas oo si toos ah loogu mudo injirta maskaxda. Noocyada kale ee qiyaasta ah sida jeljirka maqaarka iyo habka gudbinta liposomal aan habooneyn ayaa lagu baarayaa. Marka la eego tilmaamaha daaweynta ED, fayruska fosfodiesterase ee nooca 5 (PDE5 inhibitor) ayaa loo tixgeliyaa daaweynta koowaad. Fursadaha daaweynta labaad ee daaweynta waxaa ka mid ah cirbadaha ka hortagga iyo daaweynta ka hortagga uur-ku-jirka. Daaweynta cirbadeynta daawada waa daaweyn aan fiicnayn oo ugu wacan ED, oo leh jawaab celin la sugi karo oo joogto ah. Si kastaba ha noqotee, waa ficil-celin iyo xannibaadyo wax-qabad leh oo la-yaqaano oo ay ka mid yihiin miyir-beel iyo fibrosis galmo. Oggolaanshaha FDA waa sida soo socota: Kalasoocida July 1995, MUSE bisha October 1996, iyo Edex Juun 1997.
Alprostadil iyo prostaglandins kale ee taxanaha E waxay dabiici ahaan joogtaa mandheerta iyo ductus arteriosus ee ilmaha caloosha. Esterka nooca E-prostaglandins ee loo yaqaan vasodilate arterioles iyadoo si toos ah loogu nasteexo murqaha isku xiga. Waxyeelooyinka daawooyinka kale ee caafimaadka waxaa ka mid ah kororka wadnaha wadnaha, kicinta labada xididada nidaamka iyo sambabada, kicinta ductus arteriosus, xakamaynta qatarta jirka, xoojinta muruqyada galka, kordhinta socodka dhiigga ee dhiiga, iyo dib u dhac ku yimaadda waqtiga dhadhanka dhadhanka. Alprostadil-ka xididada waxaa loo isticmaalaa gawaarida iyada oo la xakameynayo dheecaan ka soo baxa dhinaca midig ama bidix si ay u ilaaliyaan cadadka ductus arteriosus ilaa wakhtiga qalitaanka saxda ah ama qalitaanka. Alprostadil guud ahaan waa mid wax ku ool ah kuwan la yiraahdo gawaarida yar yar ee dhiigga ee PO2 iyo kuwa 4 maalmaha ama ka yar. Dumarka da'da weyn ee ka weyn 4, waxaa jira hoos u dhac ku yimaada fal-celinta murqaha ah ee ductal taasoo sabab u ah is-beddelka is-beddelka is-beddelka ee is-beddelka ee derbiga ductus arteriosus. Alprostadil-da ayaa u baahan in la ilaaliyo neefsashada inta lagu jiro maamulka sababta oo ah is-qabadsiintu waxay ku dhacdaa 10-12% of neonates. Alprostadil waa FDA ogolaatay bukaanada carruurta ee da'doodu yartahay. Prostin VR Pediatric waxaa ogolaaday FDA ee 1981.
Sida loo iibsado Alprostadil, (PGE1), Prostaglandin E1 laga bilaabo AASraw
Boldenone budada ciriiga
Dufanka Canrenone (976-71-6)